VOVONANA ISIKA REHETRA MIARAKA AMIN’I ANDRY RAJOELINA : Kandida Solombavambahoaka ao amin’ny Distrik’i Miarinarivo i Fetra Rakotondrasoa
Kandida atolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina ao Miarinarivo Itasy i Fetra Rakotondrasoa. 11 mars 2019
Anio izy no hametraka ny antontan-taratasim-pilatsahan-kofidiana ao amin’nyOvec Miarinarivo. Tanora mavitrika, sahy ary mahavita azy ny lehilahy. Olon’ny serasera no sady azo ifanakalozan- kevitra tsara. Isan’ireo niady mafy ho an’ny vahoakan’i Miarinarivo izy hatramin’izay ka rariny loatra raha toa ka izy no hampitondraina ny feon’ny vahoaka ao amin’ity Distrika ity eny amin’ny Antenimieram-pirenena, Tsimbazaza. Talen’ny famoahana ao amin’ny Gazety « Madagascar Matin » izy ary mbola izy ihany koa no Tale jeneralin’ny « Vondrona Free » izay ahitana ny gazety « Free News » sy ny Radio « Free Fm ».
Lehilahy mahasahy mijoro, mikatsaka ny tombontsoan’ny maro an’isa raha i Fetra Rakotondrasoa. Isan’ ireo nitarika ny MLE, hetsika nitakiana ny fahalalahana maneho hevitra izy teo aloha teo. Tsy nikely soroka nampandany ny Filoha Andry Rajoelina nanerana ny lafivalon’ny Nosy indrindra fa ny tao amin’ny faritr’Itasy nandritra ireny fifidianana filoham-pirenena ireny na ny tamin’ny fihodinana voalohany izany na ny tamin’ny fihodinana faharoa.